Backgroud History - Department of Research and Innovation (DRI)
The Ministry of Science and Technology has been promoted toanew one standing on its own in accordance with the official order No. (30/96) dated2October 1996 to produce skilled workers, engineers, technologists and technicians of advanced science and technology, to support the development of National Economy and to carry out Research and Development tasks more successfully. Nowadays, the Ministry has been implementing the projects and researches which provide the development of the country and producing highly qualified and such skilled workers as engineers, technologists and technicians.Research is indispensable for the development of science and technology and it plays an important role for the national economic and social development.
Department of Research and Innovation (DRI) was founded since 1947 under the name of the State Industrial Research Institute (SIRI). Since from 1947 to present time, the progress on transformation of Department of Research and Innovation is as follows:
1947 : State Industrial Research Institute was founded with the Metallurgy, Cellulose and Analytical Chemistry Research Department.
1954 : To extend and reorganize the SIRI , the Union of Burma Applied Research Institute (UBARI). Act was drawn and it was enacted on 5th March, 1955. The Technical Information Centre (TIC) and Atomic Energy Centre (AEC) were added to (UBARI).
1973 : On 26th June 1973, UBARI was reorganized as the Central Research Organization (CRO).
1975 : Polymer Research Department was added to (CRO).
1994 : On 7th June 1994, Science and Technology Development Law was enacted by the Government and UBARI Act, 1954 was here by repealed. According to this Law, CRO was reorganized as Myanma Scientific and Technological Research Department (MSTRD).
1996: On 2nd Oct, 1996, Ministry of Science and Technology (MOST) was formed by the Government and MSTRD was the sole depart-ment under the MOST at that time.
1998: On 1st April, 1998 Pilot Plant Complex (Hmawbi) was transferred from Ministry of Industry No (1) to Ministry of Science and Technology and to under the MSTRD.
2003: On 1st April, 2003 Pilot Plant Complex (Hmawbi) was transferred from Myanma Scientific and Technological Research Department,Ministry of Science and Technology to Department of Technology Promotion and Coordination.
2012: On 2012 Pilot Plant Complex (Hmawbi) was transferred from Department of Technology Promotion and Coordination, Ministry of Science and Technology to Myanma Scientific and Technological Research Department.
2015: Myanma Scientific and Technological Research Department (MSTRD) was reorganized as Department of Research and Innovation (DRI).
နိုင်ငံတော်အတွက် အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန်၊ အမျိုးသားစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်နှင့် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုမို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ၀န်ကြီးဌာနအား ၁၉၉၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂) ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃၀/၉၆) ဖြင့် ၀န်ကြီးဌာနအသစ်အဖြစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အရည်အချင်း ပြည့်၀သော သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပညာရှင်များနှင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်သော သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။
သုတေသနလုပ်ငန်းသည် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာရပ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပြီး နိုင်ငံစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကအခန်း ကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက် ရှိပါသည်။ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာနသည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ “ နိုင်ငံတော် စက်မှုလက်မှုသုတေသနဌာန” အမည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ခုနှစ် မှ ယနေ့အထိ သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦးစီးဌာန၏ ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံ အဆင့်ဆင့်မှာအောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
၁၉၄၇: နိုင်ငံတော်စက်မှုလက်မှုသုတေသနဌာနအား သတ္တုဗေဒသုတေသနဌာန ၊ ဆဲလ်လူးလို့ သုတေသနဌာနနှင့် ဓါတုဗေဒဓါတ်ခွဲဌာနတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။
၁၉၅၄: နိုင်ငံတော် စက်မှုလက်မှုသုတေသနဌာနအား တိုးချဲ့ရန်နှင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန် အတွက် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လက်တွေ့သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ( Union of Burma Applied Research Institute – UBARI ) ဥပဒေအား ရေးဆွဲ ခဲ့ပြီး (၅-၃-၅၅) ရက်နေ့တွင် ဥပဒေပြဌာန်းခဲ့ပါသည်။ UBARI တွင် စက်မှုပညာ ပြန်ကြားရေးဌာန Technical Information Centre (TIC) နှင့် အဏုမြူ စွမ်းအင်ဌာန Atomic Energy Centre (AEC) တို့အားတိုးချဲ့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၃: (၂၆-၆-၇၃) ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လက်တွေ့သုတေသနဌာနအား ဗဟိုသုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ Central Research Organization (CRO) အဖြစ်သို့ ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၅: ဗဟိုသုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် ပေါ်လီမာသုတေသနဌာနအား တိုးချဲ့ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၄: (၇-၆-၉၄)ရက်နေ့တွင် “သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေ” အားပြဌာန်းခဲ့ပြီး ၁၉၅၄ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လက်တွေ့သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥပဒေအား ဤဥပဒေဖြင့် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ဤဥပဒေဖြင့် ဗဟိုသုတေသနလုပ်ငန်း အဖွဲ့အား မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ ပါသည်။
၁၉၉၆: (၂-၁၀-၉၆)ရက်နေ့တွင် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအား ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနသည် ထိုအချိန်က သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ တစ်ခုတည်းသော ဦးစီးဌာနဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၈: (၁-၄-၉၈) ရက်နေ့တွင် စမ်းသပ်စက်ရုံစု(မှော်ဘီ) အား အမှတ်(၁) စက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ သုတေသနဦးစီး ဌာနအောက်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၃: (၁-၄-၀၃)ရက်နေ့တွင် စမ်းသပ်စက်ရုံစု(မှော်ဘီ)အား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂: (၁-၄-၁၂)ရက်နေ့တွင် စမ်းသပ်စက်ရုံစု(မှော်ဘီ)အား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်‌နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၂: (၁-၄-၁၂)ရက်နေ့တွင် စမ်းသပ်စက်ရုံစု(မှော်ဘီ)အား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနမှ မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်‌နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၅: (၁-၄-၂၀၁၅)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသုတေသနဦးစီးဌာနကို သုတေသနနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဦစီးဌာနအဖြစ် တိုးချဲ့ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။